Abenzi nabathengisi baselebhu - Ifektri yaseChina Yelebhu
Ukusebenza kwe-CON500 / TDS / Salinity Meter-Benchtop
Umklamo obucayi, ohlangene nowenziwe ngabantu, ukonga isikhala. Ukulinganiswa okulula futhi okusheshayo, ukunemba okuphelele kokusebenza kwe-Conductivity, TDS kanye ne-Salinity, ukusebenza okulula kuza nokukhanya okuphezulu okukhanyayo kwenza insimbi ibe ngumlingani ocwaningayo omuhle kuma-laboratories, izitshalo zemikhiqizo nezikole.
I-DO500 Incibilikile Imitha Yomoya-mpilo
Idizayini emfushane futhi enkulu, ukonga isikhala, ukunemba okukhulu, ukusebenza okulula kuza nokukhanya okuphezulu okukhanyayo. I-DO500 ingukukhetha kwakho okukhaliphile kwezicelo ezijwayelekile kumalabhorethri, emikhiqizweni yezitshalo nasezikoleni.
Idizayini emfushane futhi enhle, ukonga isikhala, ukulinganiswa okulula ngamaphoyinti alinganisiwe akhonjisiwe, ukunemba okuphelele, ukusebenza okulula kuza nokukhanya kwangemuva. I-PH500 inguzakwenu onokwethenjelwa wezinhlelo zokusebenza ezijwayelekile kuma-laboratories, emikhiqizweni yezitshalo nasezikoleni.
Inzwa Yokusebenza Kwe-Electromagnetic, Inzwa yokuqhuba ye-TDS, Ph Inzwa electrode, Inzwa yeChlorophyll, Inzwa Yokusebenza Kwenethiwekhi yeTitanium, Isizweli sokusebenza se-Quadrupole Graphite,